Duulimaadyada ka imanaya Guatemala City kuna socda Mérida ee TAG Airlines hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada ka imanaya Guatemala City kuna socda Mérida ee TAG Airlines hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Guatemala • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadka ka imanaya Magaalada Guatemala kuna socda Mérida ee TAG Airlines hadda
Duulimaadka tooska ah waxa uu hawlihiisa bilaabi doonaa rubuci hore ee 2022 iyada oo leh afar jeer oo todobaadle ah iyo heerar tartan oo soo jiidasho leh.
Iyada oo la raacayo qaabka daabacaadda 45-aad ee Tianguis Turístico México 2021, shirkadda Guatemalan TAG Airlines ayaa ku dhawaaqday marinkeeda cusub ee hawada ee isku xiri doona Guatemala City Mérida, Yucatán, duullimaad toos ah oo bilaabi doonta rubuca hore ee 2022 oo leh afar jeer oo toddobaadle ah iyo heerar tartan oo soo jiidasho leh.
"Waxaan u mahadcelineynaa kalsoonida mas'uuliyiinta gobolka Yucatan, iyo TAG Airlines waxay ujeedadoodu tahay horumarinta xoojinta xiriirka hawada ee dhammaan dawladaha ka kooban gobolka Maya World, Yucatan waa, shaki la'aan, istaraatiijiyad halka loo socdo," ayuu yiri Julio Gamero, maamulaha guud TAG Airlines.
Iyada oo ay weheliso Marcela Toriello, oo ah Guddoomiyaha Guddiga Maamulka ee TAG AirlinesGamero ayaa yiri: "Maanta waxaan ansixin doonaa tagista sida ay uga go'an tahay shirkadaha duulimaadka inay sare u qaadaan horumarinta warshadaha duulista iyo dalxiiska, kuwaas oo ah laba matoor oo muhiim u ah kobaca dhaqaalaha magaalooyinkeena, isagoo u mahadcelinaya duqa Renan Barrera doorka uu ka qaatay fududaynta arrintan cusub. wadada."
Guddoomiyaha Gobolka Yucatan, Mauricio Vila, ayaa u dabaaldegay bilawga soo socda ee hawlgallada TAG Airlines ee gobolka, wuxuuna sheegay in shaqada wadajirka ah ay keeni doonto in Yucatan iyo Guatemala ay si fiican u qabtaan.
Waxa uu carabka ku adkeeyay in marinkan cusub ee hawada uu ka qeyb qaadan doono xoojinta xiriirka midnimada labada shacab, iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha gobolka Maayga Adduunka.
Dhankiisa, duqa magaalada Mérida, Renan Barrera Concha, ayaa sheegay in imaatinka TAG Airlines ee caasimadda Yucatecan uu yahay mid ka mid ah warka wanaagsan ee qaybta laga filayo, gaar ahaan qaab dhismeedka Tianguis Turístico Mérida 2021. Wuxuu sheegay in hawada. isku xidhka ayaa shaki la'aan dhiiri galin doona horumarinta dalxiiska iyo ganacsiga.
Yucatan waxay bixisaa dalxiiska madadaalada iyo ganacsiga ee soo jiidashada muhiimka ah, oo ay ka mid yihiin magaalada cosmopolitan ee Merida, aagga qadiimiga ah ee Chichen Itza (oo loo tixgeliyey mid ka mid ah mucjisooyinka adduunka), Valladolid, Izamal, marka lagu daro hantideeda dhaqameed, dabiiciga ah iyo gastronomic weyn. . Dhanka kale, Guatemala, sida wadnaha adduunka Mayan, waxay bixisaa kala duwanaansho ballaaran oo soo jiidasho dhaqameed iyo ganacsi, waxayna ka dhigan tahay albaabka ugu weyn ee gobolka Bartamaha Ameerika.
TAG Airlines waa shirkad 100 boqolkiiba Guatemalan ah oo muddo 50 sano ah sii waday go'aan adag oo ku saabsan isku xirka hawada iyo horumarinta.
Waxay hadda ka shaqeysaa 27 duulimaad maalinle ah Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize iyo Mexico, iyada oo wadata raxan casri ah oo ka badan 20 diyaaradood.
Duulimaadyada TAG ayaa dhawaan ka shaqo bilaabay Mexico, iyada oo khadadka hawada isku xidha Guatemala City iyo Cancun iyo Tapachula, iyo sidoo kale jidka u dhexeeya Cancun iyo magaalada Flores, ee gobolka Petén.